सेनाले बनायो चिटिक्क विद्यालय ! - Paschimnepal.com
सेनाले बनायो चिटिक्क विद्यालय !
दैलेख । जिर्ण भवन त्यसमाथि पनि पानी पर्दा विद्यार्थी भिजेरै पढ्नुपर्ने बाध्यता थियो । विद्यालय भवन नाममात्रैको थियो । पहुँचवालाहरुकै बोलबोलामा शिक्षामा आएको बजेट जाने प्रवृतीले नारायण नगरपालिका–११ जुफियामा रहेको वडाभैरव आधारभूत विद्यालय मर्मत समेत हुन सकेको थिएनन् । तीन कोठे जिर्ण भवन मर्मतमै पठनपाठन गर्नुपर्ने बाध्यता शिक्षकहरुको थियो । तर, यो समस्या थाहा पाएपछि नेपाली सेनाले विद्यालय भवन चिटिक्क पारिदिएको छ । दैलेखस्थित नेपाली सेनाको इन्द्रदल गुल्मले जिर्ण भवनलाई मर्मतसम्भार गरि नमुना बनाईदिएको छ ।
जीर्ण अवस्थामा रहेको विद्यालय भवनलाई नेपाली सेनाले दुई लाख खर्चेर मर्मत गरेको हो । हप्तादिनमै सेनाका जवानहरुले विद्यालय पुगेर जिर्ण भवन मर्मत गरेर हस्तान्तरण गरिएको हो । इन्द्रदल गुल्म दैलेखका गुल्मपति सुनिलकुमार मल्लले हप्तादिनमै विद्यालयको मर्मत सम्भार गरिएको जानकारी दिए ।
नेपाली सेनाका अधिकृत तथा २० जवान विद्यालयमै खटेर विद्यालय चिटिक्क पारेका हुन् । नारायण नगरपालिकाको आग्रहपछि सेनाको स्रोतसाधन प्रयोग गरेर विद्यालयको भवन मर्मत गरिएको गुल्मपती मल्लले बताए ।
पत्थरको छानो रहेको विद्यालय भवन अहिले जस्ताको छानो लगाईएको छ । पहिले पत्थरको छानोबाट पानी चुहिदा भवन भत्कने अवस्थामा पुगेको थियो । उक्त विद्यालयलाई गुल्मले खेलकुदका सामाग्री पनि हस्तान्तरण गरेको छ । सेनाले सामाजिक कार्य गरेर शिक्षा आर्जन गर्ने ठाउँमा राम्रो काम गरेको नारायण नगरपालिकाका प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले बताए ।
हाम्रो आग्रहलाई सेनाले स्विकार गरेर सामाजिक क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेको नगर प्रमुख खड्काले बताए । दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटाले नेपाली सेनाले समुदायको आवश्यकताका आधारमा गरेको सामाजिक कार्यले विद्यालय तथा यहाँको समाजलाई ठुलो टेवा पुगेको बताए । आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका सामुदायिक विद्यालयको जीर्ण अवस्थामा रहेको भवन निर्माण गरेर सेनाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सजिलो बनाइदिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँस्कोटाले बताए ।
जीर्ण भवनको छानो नै फेरेर सेनाले जस्ता पाता (टिन) हालेको हो । भवनमा रङ लगाएर चिटिक्क पारिएको छ । छानामा टिन पनि रंगिन हालिएको छ । जिर्ण विद्यालय भवन गाउँकै नमुना बनेको नारायण नगरपालिका –१० का वडाअध्यक्ष टंक विष्टले बताए । सेनाले थोरै बजेटमा महत्वपूर्ण कार्य गरेको भन्दै जनप्रतिनिधि स्थानीयहरुले प्रशंसा गरेका छन् ।
आगार्मी आर्थिक वर्षमा नगरपालिकाबाट बजेट विनियोजन गरि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग गर्ने नगर प्रमुख खड्काले प्रतिवद्धता गरे । विद्यालयका प्रधानाध्यापक मनसरा थापाले विद्यालयको आर्थिक अवस्थ कमजोर भएकाले मर्मत गर्न नसकेको बताईन् । उनले सेनाले जीर्ण भवन मर्मत गरिदिएकामा धन्यवाद दिईन् ।
सेनाले मर्मतबाट बचाएको रुपैँयाले विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई आवश्यक सामग्री खरीद गरी दिएको छ । विद्यालयमा भलिबल, नेटलगायतका खेलकूद सामग्री प्रदान गरेको हो ।
प्रकाशित मितिः सोमवार, चैत्र ११, २०७५ 8:56:27 PM
Prevएकलाख नगदसहित १० जना जुवाडे पक्राउ
Nextटेन्ट हाउसका सञ्चालक जाेडी ब्राउन सुघरसहित पक्राउ